Waxaa laga yaabaa in aad fiidiyo Qori videos qaabab AVCHD MTS ama M2TS. Xaaladdan oo kale, haddii aad rabto in aad iyaga u qalabka Apple aad sida iPhone, iPad ama iPod la wadaagto saaxiibadaa iyo qoyskaaga, waxaad heli lahaa madax xanuun. Taasi waa sababtoo ah AVCHD MTS ama M2TS waa in aynan inta badan codsiyada iyo qalabka, oo ay ku jiraan qalabka Lugood iyo Apple. Sidaas darteed haddii aad rabto in aad isticmaasho Lugood si ay u maareeyaan files MTS ama M2TS ama meeshaba oolin qalabka Apple, aad leedahay si loogu badalo ama MTS M2TS in Lugood qaabab ay taageerayaan hore.
Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa qaar ka mid ah AVCHD M2TS / MTS in converters Lugood. Waxaad isticmaali kartaa oo dhan oo iyaga ka si loogu badalo M2TS AVCHD / MTS in Lugood qaabab socon. Iska akhriso maqaalkan si aad u hesho sida ugu fiican Lugood video Converter.
Qeybta 1: Hel Best & Professional AVCHD M2TS / MTS in ay Lugood Converter
Qeybta 2: Free AVCHD M2TS / MTS in Lugood Converter
Qeybta 2: Online AVCHD M2TS / MTS in Lugood Converter
App Tani waa qalab ku haboon si ay ugaaraan aad gool. Ma aha oo kaliya ku siinayaa awood u leeyahay inuu badalo ama MTS M2TS in Lugood qaab socon sida MP4 effortlessly, laakiin sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u dhinto, dalagga, ku milmaan iyo edit faylasha aad la dhisay-in editor video. Sidaa daraadeed, waxaad badbaadin kartaa oo wuxuu ku raaxaysan xusuustaada hore la saamayn ugu fiican. Taasi waa sida.
Professional video Converter: Tani Converter Lugood taageertaa diinta 150+ video qaabab. Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo M2TS / MTS dhammaan qaababka ay caawinayso Lugood sida MP4, MOV, M4V.
Wax soo saarka sare ee video tayada: The gediyay videos ku jira tayo sare leh. Waxaa hayn doonaa 100% dhalshada video tayada.
Sida dhaqsaha badan Conversion Speed: Waxaa Dufcaddii u bedeli karaan videos at 30X xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan ku dhowaad dhammaan tartameen.
Great qalab video tafatirka: Waxaad u isticmaali kartaa si kor video by saamaynta ku daray, ama wax ka bedel aad video laamo, qoqobada, falinjeeerka, iwm
Xoog Lugood video gubi: Waxaad qaadan kartaa qalab ay gubaan video in kasta oo qaab si DVD iyo codsan ah arrimo menu badan si ay u sameeyaan xirfad aad farshaxanka.
Sida loo badalo M2TS AVCHD / MTS in Lugood
1. Ku dar AVCHD M2TS MTS in app this
Ka dib markii aad qaaday files AVCHD M2TS MTS ka fiidiyo ugu kombiyuutarka, waxaad iyaga dajiyaan karaa in app this. Si aad u samayn, waxaad tagi kartaa dhufatey "Beddelaan" tab> "Add files" dedeg meeshii faylasha aad ku kaydsan yihiin oo markaas iyaga soo dhoofsadaan. Ama si toos ah kuwaa oo si app this. Ka dib markii in, faylasha aad la soo bandhigi doonaa in thumbnails in app this.
2. Dooro qaab Lugood ah socon
M4V waa mid ka mid ah qaababka ugu Lugood taageertaa. Waxaad ku dooran kartaa liiska saarka app. Si aad u furato liiska wax soo saarka, riix icon Qaabka mid kasta bar video shayga. Markaas, waxaad tagtaa "qaab"> "Video" category iyo dooran M4V. Dabcan, waxaad u tagi kartaa "Device"> "Apple" category in ay doortaan mid ka mid ah qaab filaayo, kaas oo si buuxda u la jaan qaada Lugood.
3. Edit aad AVCHD files M2TS MTS (Ikhtiyaar)
Mar walba waxaa jira qaar ka mid ah clips aan la rabin in aad files footage kuwan. In si wanaagsan loo sii xusuustaada macaan, waxaad isticmaali kartaa shaqo tafatirka this app ee ku noola, cut, midowdo videos ama ku darto saamaynta qabow iwm
4. U beddelaan MTS M2TS in Lugood
Ka dib markii previewing saamaynta uu furmo kulanka xiisaha leh ee, waxaad bilaabi kartaa si loogu badalo files u Lugood haddii aad ku qanacsan tahay saamaynta. Just riix "Beddelaan" button oo markaas ha soo app this samayn waxyaalihii nasasho kuu.
App waxa uu leeyahay awood u leh inay ku darto files wax soo saarka si ay u Lugood qaab beddelidda kadib inta aad sameyn goob loo baahan yahay. Tag "Menu"> "rabtid"> "Beddelaan" si sax ah "Add files si Lugood Library qaab beddelidda kadib". Haddii aan, aad dajiyaan karaa files wax soo saarka si ay u Lugood gacanta.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo AVCHD ka M2TS / MTS in Lugood Converter
# 1. Free M2TS AVCHD / MTS in Lugood Converter: Wondershare Video Converter Free
Pro: AVCHD nadiif ah oo lacag la'aan ah M2TS / MTS in Converter Lugood, oo awood u leh diinta, tafatirka iyo degsado videos.
1. Tani AVCHD free M2TS / MTS in Converter Lugood kaliya u bedeli karaan si caadi ah videos. Waxaad ku isticmaali karin si loogu badalo in ay 3D iyo HD videos.
2. Waxaa saari karin ilaalinta Lugood DRM. Waxaa loola jeedaa in Lugood ay soo iibsatay video sidoo kale la keeno karo in ay qaabab kale u arkaysid ee aaladaha kale ee la qaadi karo.
3. Waxaad ma isticmaali karto si lacag la'aan ah aad AVCHD M2TS / MTS video inay DVD gubi.
Qeybta 3: Online AVCHD M2TS / MTS in Lugood Converter
Sida loo Beddelaan iyo Import VOB in Lugood
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan M2TS AVCHD / MTS in Lugood